Ngingakwazi yini ukuthola iseluleko esivela ku-Amazon ohlwini lwesazi?
Iningi lethu (ukungasho ukuthi wonke uchwepheshe wama-Amazon uhlu) uyazi ukuthi le ndawo emakethe ye-inthanethi egcwele kakhulu iyinjini enkulu yokusesha yomkhiqizo. Futhi into ukuthi i-Amazon mhlawumbe indawo enkulu kunazo zonke zaloluhlobo oluthile olutholakala kuwebhu. Kusho ukuthi izinga elivamile lokuncintisana emakethe liyingozi kakhulu futhi libudlova lapho. Ngakho-ke, ungaphila kanjani esimweni esinjalo esingenabuhlobo esibhekene ne-Amazon online marketplace? Ngiyakholwa ukuthi isihluthulelo sokuphumelela kwezebhizinisi ku-Amazon sisebenza ngokuqondile ohlwini lwakho lokuhlelwa komkhiqizo kwamagama angukhiye alungile ukuze ukwazi ukuchayeka okungaxhunyiwe ku-intanethi kusesho lento ngaphezulu. Futhi ngezansi kukhona izitatimende ezinengqondo kanye nemibono ehlakaniphile evela ku-Amazon ohlwini lobuchwepheshe bokuthi uqhubekele ukuthuthukisa ikhasi lakho ezingeni elisha - диван для домашнего кинотеатра.
Amathiphu wokuthuthukisa nokwaziswa kusuka ku-Listing Amazon Listing
Okokuqala, ake sibhekane nakho - ukuhlelwa kokufakwa komkhiqizo wakho kuyinkqubo eqhubekayo engeke ifike kuze kube sekupheleni. Ngisho ukuthi abathengisi abahamba phambili be-Amazon kanye nomkhiqizo wabo ovamile ukubeka isibalo empeleni kusekelwe ekusebenzeni okuvamile kokuhweba, kuhlangene nendlela efanele yokufakwa kuhlu komkhiqizo ukukhishwa kwento. Futhi into yukuthi lesi sibalo sokuqala sesibalo sibuyekezwa njalo ukuze sibuyekezwe ngehora futhi sibonisa yonke imicimbi yokuthengisa yakamuva yayo yonke imikhiqizo ekudayiswa ngaphezu kwalapho. Futhi nanka amanye amathiphu abalulekile namasu okumele aziwa kuphela yizo zonke izici zakwa-Amazon okufakwa kuhlu, kepha yilowo nalowo ohwebayo onomdlandla onikezwa yi-intanethi enikeza noma yiluphi uhlobo lwezinto ezithengiswayo. Ngakho-ke, yilokhu okufanele ukwazi mayelana nokuhlelwa kokufakwa komkhiqizo we-Amazon, ngokufingqiwe.
Thatha ngokujwayelekile, unezinto ezizungeze izinhlamvu ezingu-50 zokugcwalisa amasimu akho ayisihlanu wokusesha. Futhi into eyinselele kakhulu lapha usebenzisa le mikhawulo yomlingisi ngokuhlakanipha futhi wenza konke okusemandleni akho ukwakha imigomo eminingi eyingqayizivele yemiphumela yosesho ngangokunokwenzeka.
Amazwi Wokusesha Ngamanye Amazwana (Akunamaphutha)
Ukubuyiselwa kuphakathi kwezici zokusesha eziyinhloko ezaziwa yiwo wonke ama-Amazon, uhlu lolwazi. Kodwa-ke, phawula ukuthi izinga elifanayo lomdlalo wombhalo libuye libe nesici esinqunyiwe esisezingeni eliphezulu (ngokusekelwe ezinkombandlela ezisemthethweni zokubeka ama-Amazon).
Nazi ezinye izici ezinamandla (ngaphandle kokulingana kombuzo oqondile) okucatshangwa yi-A9 yokusesha i-algorithm:
1. jikelele umlando wokuthengisa;
2. inqubekela phambili yamuva yokuthengisa (inyanga zonke, masonto onke, njll. );
3. intengo yomkhiqizo wokuncintisana nokukhethwa;
4. ukutholakala kwamanje.
Imigomo Yosesho Yesikhathi eside
Ungayichitha isikhathi sakho nomzamo ngokusebenzisa noma yimiphi imigqa emide yomsila noma yomuntu ngamunye osuvele ufakwe kusihloko somkhiqizo wakho, kanye nohlu amaphoyinti ezinhlamvu ekhasini lakho lomkhiqizo.
Zizwa ukhululekile ukucabangela noma yikuphi ukuhlanganiswa okwanele kanye nokuhlanganiswa kwegama eliyinhloko le-LSI, okungenzeka lisetshenziswe abathengi abaningi abaphilayo abafuna umkhiqizo ofanayo.
Kungcono ukuthi ugweme ukusebenzisa amakhodi wokucaphuna, ngokuvamile ngoba lokhu kuzokwehlisa ubude bakho obubekiwe kakade kuzo zonke izingxenye zekhasi lomkhiqizo.
Ungazikhathazi ngezinye izimpawu zokubhala, ubuningi / ubuningi, kanye nanoma yikuphi ukuhlukahluka kwegama elihlobene nalokhu - i-Amazon ithi imizamo enjalo ngeke ibe yinto engenamsebenzi, ngoba injini yayo yokusesha ivame ukuphatha lezi zinhlanganisela ngendlela efanayo.